सुशीला कार्कीलाई प्रश्न - 'तपाईं अब राजनीतिमा सक्रिय बन्नु हुन्छ ?' | Ratopati
सुशीला कार्कीलाई प्रश्न - 'तपाईं अब राजनीतिमा सक्रिय बन्नु हुन्छ ?'
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेकी सुशीला कार्की शनिबार डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति समर्थन जनाउँदै सडकमा ओर्लिएपछि कानुनविद् अधिकारीको मत फेरिएको छ । कार्कीको छवि अवकाशपछि विवादुमा तानिँदै गएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
कार्कीसँगको अन्तवार्ता आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
तपाईं अब राजनीतिक रूपमा सक्रिय बन्नु हुन्छ ?